Nwa Nwanyị Na-enweghị Innocent Little Little Lover 150CM TPE Mmekọahụ Doll Karen Nora
Karen Nora - 150CM Nnukwu anya Blue Anya Anya European Style Ọmarịcha Innocent Girl TPE Mmekọahụ Mmekọahụ
"O doro gị anya?" Ọ bụ ezie na ọ nwara ịbụ onye nwayọ, esemokwu ọ na-enwe n'olu ya gosipụtara ọchịchọ ya. Obi ụtọ mere ka ụda olu ya sie ike. Anyị emebeghị ya, anyị emeela ya ọtụtụ ugboro, ma anyị na-anọkọ ọnụ mgbe niile. Mana ọbụlagodi na anyị na-ekwu maka otu o si amasị echiche efu, ọ dịtụghị mgbe m gwara ya okwu. Mana ọ bụ ụbọchị Valentine ma ọ dị ụtọ nke ukwuu wee nye m Roses, chọkọletị na ọla aka ọla edo nke m na-ele kemgbe ọtụtụ ọnwa.